Ahoana ny fampiasana Google Analytics hanatsarana ny ezaka ara-barotra | Martech Zone
Alahady, May 31, 2015 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Indraindray mieritreritra aho fa tokony hanova ny anaran'i Analytics ny questionalytics satria Analytics toa tsy manome ny famakafakana tadiavinao… matetika dia miteraka fanontaniana maro kokoa. Raha tsy azonao ny angona ao ambadiky ny sivana, ny fizarana ary ny tabilao - dia mety haminavina hevitra mahatsiravina miorina amin'ny fomba fisintomanao tatitra manokana ianao.
Amin'ny tranga mazava, ny olona ao Quicksprout manome ity statistika mampivarahontsana ity:
80% amin'ireo mpivarotra antsinjarany no mampiasa diso ny Google Analytics.
Ireo infographic dia mandehandeha amin'ny fomba fanatsarana ny metrika amin'ny alàlan'ny famakafakana ireo tatitra mifanaraka amin'izany, ao anatin'izany:
Ampitomboy ny fivezivezena ara-organika Fangatahana SEO ary tatitra momba ny pejy.
Ampitomboy ny fivezivezena ara-organika loharanom-pahalalana momba ny loharanom-baovao.
Mandany fotoana bebe kokoa mifantoka amin'ny familiana fifamoivoizana fanampiny amin'ny tatitra momba ny referrer top an'ny loharanom-pifamoivoizana.
Miteraha atiny bebe kokoa izay mihaino ny mpihaino anao amin'ny fampiasana ny tatitra topimaso momba ny atiny.
Esory ny bottlenecks tatitra mikoriana ny mpampiasa.
Manatsara ny finday amin'ny alàlan'ny tatitra momba ny finday.
Use tatitra manokana ho an'ny fahitana tsy manam-paharoa.
Ataovy manokana ny atiny sy tolotra amin'ny fampiasana ny tatitry ny mpihaino.
Tags: tatitry ny mpihainotatitra topimaso momba ny atinytatitra manokanaGoogle Analyticspejy fitsidihan'ny google analyticsgoogle analytics seoahoana nony fomba fampiasana google analyticstatitra momba ny findayquicksproutloharanom-pahalalana loharanom-baovao loharanom-baovaotatitra momba ny referrer top an'ny loharanom-pifamoivoizanatatitra mikoriana ny mpampiasa